«Miady vola» -
11/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Fotoana fikaramana izao ho an’ny ankamaroan’ireo olona manao, na manatrika ny prôpagandy, tranga efa tsy zoviana amin’ny maro intsony fa efa fanao hatramin’izay nisian’ny fifidianana teto amin’ny firenena. Samy mba mitady ny tombontsony araka izany, na ireo kandidà miezaka manao «Charme »amin’ireo mpifidy, na ireo olona milaza ho manolo-tena hampandany ireo kandidà. Tsy mahagaga araka izany raha toa ka feno olona miady vola aorian’ireny hetsika maro tanterahina ireny.
Matetika no tsy mitana ny teny nomeny, ka tsy manaja izay nifanarahana tamin’ireo olona nokaramainy ireny kandidà sy ny mpomba azy ireny, ka miteraka fimenomenonana ho an’ireo olona nampiasaina. Ireto farany, izay terena tsy maintsy manao ny fanamiana misy ny sarin’ny kandidà isan’andro, ary tsy maintsy mihorakoraka rehefa mikabary ilay kandidà manakarama azy, raha tsy izany dia tsy mivoaka ilay vola fanome isan’andro.
Amin’ny maha karama azy dia manao izay ho afany ireto olona ireto, amin’ny fanatanterahana izay nifanarahana isan’andro. Matetika anefa no tsy manaja izay nifanarahana ireo kandidà sy ireo mpomba azy amin’ny fandoavana ny vola, ka voatery mitaky izany ireo efa nampanantenaina. Tranga iray efa niseho teny amin’ny faritra Antanikatsaka iny izany, nandritra ny fanokafana ny fampielezan-kevitra nataona kandida iray, tsy navelan’ireo olona nokaramaina nihazo ny toerana nisy azy mantsy ilay tompon’andraikitra tokony ho nandoa ny anjara volan’izy ireo, ka saika niafara tamin’ny sakoroka ny raharaha.
Tsy niafina tamin’ny maro ihany koa ny tranga teny Ankadindramamy, izay saika niafara amin’ny zava-doza. Efa saika nodoran’ny olona mantsy ny tranona solombavambahoaka iray ny Talata lasa teo, satria tsy azo ilay vola nifanarahana. Marihina fa tsy olona vitsy ireo tonga nitaky sy niady ny volany teny an-toerana tamin’io andro io fa maro, ka izay angamba no nampananosarotra ny fanomezana izany.
Santionany ihany ireo noraisina ireo, azo antoka mantsy fa mahazo vahana ny ady vola any amin’ny faritra maro ao anatin’izao prôpagandy izao. Ny tsikaritra aloha, dia mihamasiaka ny vahoaka malagasy, ary tsy manaiky fitahina toa ny hatramin’izay intsony. Tokony hitandrina araka izany ireo efa zatra ny lalan-dririnina, ka mampanantena poakaty ireo olona karamainy.
“Voin-kava mahatratra”. Izay no azo hamehezana ireo fahavoazana tamin’ireo faritra maro nandalovan’ny rivodoza Enawo. Araka izay indrindra, nahatsapa ny avy amin’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM) fa maro ireo faritra sy mponina tra-pahavoazana tamin’ny fandalovan’iny ...Tohiny
10,6 miliara dolara:TSY NOTROSAIN’I MADAGASIKARA